အိန္ဒိယ: အဆိုပါန်ကြီးချုပ်သစ်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အကြီးတန်းအကြံပေးရရှိသွားတဲ့ | အိန္ဒိယသတင်း - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ "အိန္ဒိယ: အဆိုပါန်ကြီးချုပ်သစ်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အကြီးတန်းအကြံပေးရရှိသွားတဲ့ | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အဆိုပါန်ကြီးချုပ်သစ်ကိုကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်အတွင်းရေးမှူးနှင့်အကြီးတန်းအကြံပေးရရှိသွားတဲ့ | အိန္ဒိယသတင်း
အိန္ဒိယ: အသစ်အဆင့်ဆင့် PMO အသစ်ကလေး၏ကျောင်းအုပ်အတွင်းရေးမှူး၏အရပျ၌ကျောင်းအုပ်ကြီးအတွင်းရေးမှူးအဖြစ်ခန့်အပ်, P ကို ​​K. Mishra နှင့်အတူဗုဒ္ဓဟူးနေ့တရားဝင်ခဲ့သည် Nripendra Misra အဘယ်သူသည်မကြာသေးမီကနုတ်ထွက်ခဲ့ကြသည်။ Mishra အတူဟောင်းဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းဝန်, P. K သည် Sinha ဝန်ကြီးချုပ်မှအကြီးတန်းအကြံပေးခန့်အပ်ခဲ့သည်။
Misra ၏နှုတ်ထွက်စာကိုဖြန့်ချိခဲ့ပါတယ်ကြောင့်သူအစီအမံများ၏ဤသို့တရားဆိုင်းငံ့နှစ်ပတ်အတွင်းများအတွက်ရုံးခန်းထဲမှာဆက်ရှိနေလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်ကတည်းကအဆိုပါအပြောင်းအလဲများကိုမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသည်။ သူကမကြာသေးမီက reappointed ခဲ့နှင့်ပြည်နယ်များ၏ဝန်ကြီးရာထူးများသို့တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Misra ရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုတစ်ဦးအံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
Sinha ၏ချိန်းဆိုအပိုဆောင်းဦးစီးချုပ်အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် PK Mishra ၏အစားထိုးနှင့် ပတ်သက်. မျှော်လင့်ချက်ဆန့်ကျင်။ Mishra အကြီးတန်းချိန်းကြီးကြပ်ခြင်းနှင့်အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ဆက်လက်သငျ့သညျ။ Sinha ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဝန်ကြီးအဖွဲ့အတွင်းဝန်အဖြစ်မိုဒီအစိုးရအစပျိုးနဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းအချို့သောမူဝါဒကိစ္စများဂရုစိုက်နိုင်ဘူး။
သူဂူ၏ CM အခါ PK Mishra န်ကြီးချုပ်မိုဒီနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ခဲ့သိရသည်။ ဒါဟာစိုက်ပျိုးရေး, ဘေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှု, စွမ်းအင်ကဏ္ဍ, အခြေခံအဆောက်အအုံဘဏ္ဍာရေးနှင့်စည်းမျဉ်းများ၏ဒေသများရှိတစ်ဦးမတူညီကြလုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံရှိပါတယ်။ "သူ့အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းပရိုဖိုင်းကိုထူးခြားတဲ့ဖြစ်ပါသည်: သုတေသန, စာပမြေား, မူဝါဒရေးဆွဲရေးနှင့်စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲမှု "တစ်ဦးသတင်းအချက်အလက်စာရွက်စာတမ်းပြောပါတယ်။
PK Mishra စိုက်ပျိုးရေးအတွင်းဝန်နှင့်ထိုကဲ့သို့သောစိုက်ပျိုးရေးနှင့်အမျိုးသားရေးစားနပ်ရိက္ခာလုံခြုံမှုမစ်ရှင်၏အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအစီအစဉ်ကိုအဖြစ်အစပျိုးတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်။
သူက Semi သီးနှံဒေသများများအတွက် ADB ကစီမံကိန်းများ၏ညှိနှိုင်းမှုနှင့်အကောင်အထည်ဖော်အတွက်ဗြိတိန်နှင့်ကမ္ဘာ့ဘဏ်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးရေးလေ့လာရေးဌာနအဖြစ်နိုင်ငံတကာသုတေသနအင်စတီကျုနှင့်အတူပူးပေါင်း -arid ။ အစိုးရနောက်ဆုံးမိုဒီခုနှစ်တွင်သူသည်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ဘေးအန္တရာယ်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အထူးအာရုံစိုက်ပေးဆောင်။ သူကစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလေ့လာရေး, Sussex တက္ကသိုလ်အတွက်ပါရဂူဘွဲ့ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ ထို့အပြင်သူသည်စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်၏ဒေလီ School မှတစ်ဦး, MA ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။
အိန္ဒိယ: အစိုးရစီးပွားရေးကျဆင်းမှုမှသူ့ဟာသူဒါပေမယ့်အရာအားလုံးအပြစ်တင်: ကုမ္ပဏီ၏အပေါ် FM ရေရဲ့မှတ်ချက်တွေ | အိန္ဒိယသတင်း